Shirarkii u socday maamulka KMG ah magaalada Kismaayo iyo dowlada Somalia oo fashilmay. - jornalizem
Shirarkii u socday maamulka KMG ah magaalada Kismaayo iyo dowlada Somalia oo fashilmay.
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose waxaa xalay ku soo dhamaaday wadahadalo muddo shan maalmood ah uga socday halkaas masuuliyiinta maamulka Kismaayo oo uu horkacayey Axmed Madoobe iyo dowlada Somalia oo ay metelayeen wafdi uu horkacayey raisul wasaaraha Somalia Cabdi faarax Shirdoon.
Wasiirk arrimaha gudaha iyo amaniga Qaranka, C/kariin Xuseen Guuleed oo xalasy shir jaraa’id ku qabtay Kismaayo ayaa sheegay in labada dhinac ay isku mari waayeen qodobbo dastuuri ah oo laga gudbi waayay, isagoo xusay in dhankooda ay tanaasul fara badan sameeyeen sidaasoo ay tahayna ay waxba suuragal noqon waayeen.
Guuleed ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in wafdiga xukuumadda Somalia ay ku sugnaayeen Kismaayo shan maalmood.
Waxaana la kulannay ayuu yiri maamulka KMG ah ee Kismaayo iyadoo wadahadallada loo saaray guddiyo farsamo, kuwaasoo ka hadlay arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo ay ka mid yihiin Maamul Sameynta Jubbooyinka iyo Federaalka, Dekedda iyo Garoonka Kismaayo, Amniga iyo Ciidamada dib u heshiisiinta.
“Xukuumaddu waxay aad isugu dayday inay wixii tanaasul ah oo ay sameyn karto ay sameyso, balse waxaa soo baxay qodobbo dastuuri ah oo in laga gudbo ay aad u adkaatay, waayo dastuurka waa midka keliya ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay heshiiska ku yihiin,” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha.
Sidoo kale, wasiirku wuxuu sheegay inay rajeynayaan inay wadahadaladu sii socodaan qodobbada la isku hayana loo heli doono xal iyadoo la dhowrayo buu yiri dastuurka iyo rabitaanka shacabka iyo dareenkooda.
Quus ma joogno, Rajada aan qabno in la heshiiyo oo la gaaro wax heshiis lagu yahay aad iyo aad ayay u weyn tahay Xukuumadduna waxay soo saari doontaa war ay ku muujinayso go’aankeeda kama dambeysta ah” ayuu wasiirkU intaa ku daray.
Ma jiro war ku saabsan wadahadalada oo ka soo baxay maamulka KMG ah ee Kismaayo, hase ahaatee Raisul wasaaraha Somalia iyo wafdigii uu horkacayey ayaa lagu wadaa iney maanta ku soo laabtaan magaalada Muqdisho, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku mari waayey ay ka mid ahaayeen cida u xaqa u leh iney hormuud ka noqoto maamul u sameynta Jubooyinka iyo arrimo kale.